ओम र मनास्लुको एकीकृत कारोबार – Nepal Reports
Home Business ओम र मनास्लुको एकीकृत कारोबार
Previous Video श्रीमतीको हत्या प्रयासमा अष्ट्रेलियामा एक नेपाली जेल चलान। हत्या नै भएको भन्ने समाचार गलत।
Next Video मुस्ताङ लैजान लागेका ७ बालबालिकको उद्धार
ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र मनास्लु विकास बैंक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ओम र मनास्लुको संयुक्त कारोबार शुभारम्भको शुक्रबार उद्घाटन गरे । राष्ट्र बैंकले यही असारभित्र पु¥याउन भनेको साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजीको लक्ष्य चुम्न ओमलाई अब समस्या नहुने भएको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद र बोनस सेयर वितरणपछि उक्त लक्ष्य पूरा हुने भएको हो । मर्जपछि ओमका अध्यक्ष सुशील गोसलीले पुरानै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भएका छन् । मनास्लुका अध्यक्ष विजय मल्ल सञ्चालक समिति सदस्य भएका छन् । ओमका सिइओ विश्वमोहन अधिकारीको जिम्मेवारी पुरानै छ । मनास्लुका निमित्त महाप्रबन्धक दुर्गा पुरीले सहायक महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मर्जरपछि ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकका सिइओ विश्वमोहन अधिकारीले जानकारी दिए । मर्जरपछि बैंकको चुक्तापुँजी झन्डै १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप १५ अर्ब ४० करोड, कर्जा १३ अर्ब ८० करोड, शाखा संख्या ४१, कर्मचारी संख्या ३ सय २७, निक्षेप ग्राहक एक लाख ९८ हजार, कर्जा ग्राहक २५ हजार १ सय, एटिएम ग्राहक १५ हजार र मोबाइल बैंकिङ ग्राहक ३७ हजार ५ सय पुगेको उनले जानकारी दिए ।
उद्घाटनपछि गभर्नर डा. नेपाललेसरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको संकेत गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि पूर्वाधार, सुरक्षा र इन्टरनेट पहुँच अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘सबै पूर्वाधार पु¥याउनुहोस् भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं, सरकारले पु¥याउँछु भनेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बनेपछि कुन बैंक कुन स्थानीय तहमा पुग्ने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ ।’महालेखा परीक्षण लगायत दृष्टिकोणका कारणसरकारले ‘क’ वर्गको बैंकका शाखा भन्नु स्वभाविक रहेको उनले बताए । ‘पहिला वाणिज्य बैंकका शाखाबाट सेवा दिऊँ अनि विस्तारै अन्य वित्तीय संस्थाका शाखा पनि लैजादै गरौंला । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ,’उनले भने ।
समग्र देशको वित्तीय अवस्था अत्यन्त सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । मर्जर नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सबल र सक्षम बनाएकोउनको भनाइ थियो । निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बलिया हुनुपर्ने र त्यसका लागि मर्ज नीति उपयोगी भएको धारणा उनलेराखे । वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले आफूले राखेको पैसा आफ्नो नठान्न उनको आग्रह थियो ।
बैंकले दिएको ऋण जसरी पनि असुल हुने हुँदा कतिपय मामलामा सरकार वा नेताले भनेजस्तो राष्ट्रबैंकले गर्न नसक्ने उनको प्रष्टोक्ति छ । देशमै केही गर्न चाहनेका लागि अवसर नै अवसर रहेको उनले बताए । जुनसुकै देशमा रोजगारीका लागि जाँदा नोकर बन्न जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यहीँ मालिक बन्ने अबसरको उपयोग गर्न युवाहरुलाई आग्रह गरे ।
बैंकका अध्यक्ष सुशीलकुमार गोसलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, बैंकका सञ्चालक तथा संयुक्त मर्जर समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार बाटाजु, साविक मनास्लु विकास बैंकका अध्यक्ष तथा वर्तमान सञ्चालक विजय मल्ल, पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष भरतराज ढकाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी लगायतले शुभकामना दिएका थिए ।
next मुस्ताङ लैजान लागेका ७ बालबालिकको उद्धार